सलमानलाई प्रहरीले किन घेरा हाल्यो ?
अभिनेता एवं दवङ स्टार सलमान खान प्रहरीबाट घेरिएका छन् ।
हरिण शिकारको कारण अदालत धाउँदै आएका सलमान खानलाई प्रहरीले किन घेरेको हो त ? सवैको चासो रहेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार ग्यांगस्टर लरेन्स बिश्रोईले ज्यानको धम्की दिएकाले उनको सुरक्षामा प्रहरी खटिएको हो ।
सलमान पछिल्ला दिन ‘रेस–३’ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छन् । मुम्बईको फिल्म सिटीमा सुटिङ भइरहेको अवस्थामा मंगलबार पुलिसको एक टोली एकाएक सेटमा पुग्यो र सलमानलाई घेर्योब । नवभारत टाइम्सका अनुसार पुलिसले हतियारधारी ग्यांग मुम्बईको त्यो एरियामा प्रवेश गरेको सूचना पाएको थियो । सोही आधारमा पुलिसले सलमानको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको हो । पुलिसले सलमानलाई सुरक्षा दिँदै सुटिङस्थलबाट घर बान्द्रास्थित उनको घर पुर्यामएको थियो ।
सलमानले भने- कट्रिनालार्इ साथै लिएर नेपाल आउँछु (भिडियोसहित)